Semalt: Olee otú Nkọwaputa N'ịntanetị ga-emepe Ntọala nke Onwe Gị
Ma ị nwere ihe eji eme njem na-eme njem, azụmahịa dị n'etitima ọ bụ akụkụ nke aha aha n'ime otu nnukwu nzukọ, ịmara ọhaneze dị nnọọ mkpa maka uto gị dị ka ọ dịga-adị mkpa maka nnukwu ụlọ ọrụ ọ bụla. Ị nwere ike iche na ịmepụta ikike nghọta gị ugbu a bụ ihe efuihe onwunwe, n'ihi na ị bụ naanị onye na-azụ ahịa ma ọ bụ onye nwe ụlọ ọrụ achụmnta ego n'onwe ya mana nke a bụ ihe dị ichenke eziokwu. Michael Brown si Ọkachamara Ọrụ Ntanetị na-enyefe nghọta na ntanetị ịntanetịeme ka o doo gi anya ma kwalite mmepe ahia.
Ịmepụta ihe dị mkpa maka ịme njikọna ndị ahịa. Ndị mmadụ na-agwa ndị ọzọ banyere ahụmahụ dị mma, ya mere, okwu-nke-ọnụ na-agbasa ma na-eme ka gịmmepe ahia. Uzo a ga eme ka azụmahịa gi buru ibu, ma, ma eleghị anya, ị ga-enweta uche nke mgbasa ozi.
N'elu ya niile, ị bụ. Dị ka onye nchoputa ụlọ ọrụ, ịbụ CEO na ihu nzukọ. Ọrụ gị nwere ike ịghọ nnukwu ma nwee ọganihu dị ka ịchọrọ ka ọ. Ụfọdụndị nrọ maka ụdị nke ihe ịga nke ọma, ebe ndị ọzọ na-ahọrọ ịhapụ ụlọ ọrụ ha dị ntakịrị ma bụrụ ndị nwere ike ịhazi ya. Ma ọ bụghịụzọ, isi ihe mere ị ga-eji mejuputa atumatu a na-achota ya bụ n'ihi na ndị ahịa ga-akpakọrịta ọrụ ma ọ bụ ngwaahịa gịunu, dị ka onye.
Chee echiche banyere ọtụtụ ndị dị ukwuu, na ozugbo ha malitere obere,ebiliwo n'elu site n'inwu ihe siri ike. Chee echiche banyere Colonel Harland Sanders nke KFC, ọkụkọ nri nri ngwa ngwanke malitere na obere cafe na Kentucky na U..S. na 1930 wee gbasaa na UK na Ireland na 1965 dịka akụkụnke ihe ghọrọ oke ego. Ma, ezigbo onye n'azụ ya niile, "The Colonel" bụ ihu na n'azụ ụlọ ọrụ ahụ.N'ihi ya, ihe KFC ji eme ihe na-aga nke ọma n'ihi ọrụ ya kachasị elu, àgwà pụrụ iche, a pụrụ ịtụkwasị obinkwa na nkwa. Ọzọkwa, ha catchy "Finger Lickin 'Ezi" ahịrịokwu mere mkpado na-echefu echefu na reeled ndị mmadụ.
Olee otu ị ga - esi zụlite profaịlụ gị site na ịmepụta ihe dị ike?
Nweta kpọmkwem okwu na akara dị ike na logo.Site n'iji okwu ole na ole mee ihe, ị ga-ebuga ozi nke azụmahịa gị.
Ụbọchị ndị a, onye ọ bụla nwere ike ịmepụta ebe nrụọrụ weebụ nke na-eme haụlọ ọrụ yiri ka ọ karịrị. Mgbe ụfọdụ, nke ahụ bụ ihe dị mma, dabere ma ị na-enye ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ.Mụọ ndị na-asọ gị asọ na usoro ha nwere ike ịmepụta ha, deezie ọtụtụ ụzọ ị pụrụ isi wepụ ha.
Ịmepụta ihe ịntanetị iji bulite profaịlụ gị nwere ike ime site na:
Nkwalite na mgbasa ozi
Nlekọta ihe anya -foto ma ọ bụ ihe osise, eserese
Mgbasa ozi email na akwụkwọ akụkọ
Nkwado-elu ma ọ bụ nkwukọrịta
Ịmepụta bụ atụmatụ. Ọ bụ ụzọ ịgwa gịndị ahịa na ọrụ gị ma ọ bụ ngwaahịa gị bara uru iji. Ịkpọ ihe n'Ịntanet na-achọ ịbịaru nso. Njikọ nke anyana ahụmahụ na-emepụta ihe na-egosi na ihuenyo na-egosipụta ihu gị dịka ụlọ ọrụ na-adịghị ahụkebe. Dị ka onye ọchụnta ego ma ọ bụ onye nwe ụlọ ahịa,ị ga - ahụ na ọ bara uru ịzụ ahịa gị n'aha aha a na - apụghị ịmata nke ọma Source .